ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: လတ်တလော စိတ်ဆန္ဒများ (ဆွေလေးမွန်)
(1)အစားချင်ဆုံးအစားအစာ- မုန့်ဟင်းခါး၊ ပေါ့ဆိမ့်လက်ဘက်ရည်လေးတစ်ခွက်၊ ကြေးအိုး၊ ၀က်သားဒုတ်ထိုး
(အားလုံး အစားချင်ဆုံးကြီးပဲ ဆက်ရေးနေရင် စားချင်စိတ်တွေပိုများလာမှာစိုလို့ :P)
(2)နေ့တိုင်းစားဖြစ်တဲ့အစား - ပေါင်မုန့် ၊ ကော်ဖီ နဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ် (အလုပ်မအားသောကြောင့် လွယ်ကူလျင်မြန် အလျင်စလို စား၍ရသော အစားအစာများသာ စားဖြစ်သည်)
(3)အလိုချင်ဆုံးရေမွှေး - မရှိ
(4)သုံးဖြစ်နေတဲ့ရေမွှေး - မရှိ
(ရေမွှေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ မရှိ မရှိလို့ဖြေတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ရေမွှေးနံ့ရရင် အိပ်ငိုက်တတ်လို့ပါ။
ကျွန်မဆွတ်ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားသူဆီက ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးမိနစ်လောက်ပဲ အဲဒီအနံ့ရ အိပ်ငိုက်တော့ တာပဲ။)
(5)အလိုချင်ဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင် -မွေးနေ့ နီးနေပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဘာလိုချင်မှန်း သိသေးဘူး
(ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ထုပ်ပိုးရတာလဲ သက်သာ ပေးတဲ့ သူလဲ သယ်ရတာ မလေးအောင်လို့ စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်းလောက် ဆိုတော်ပါပြီ (:P))
(6)အလိုချင်ဆုံးဖုန်း - အဲဒါလဲ မရှိဘူး။ ကျွန်မက အဆင်ပြေသလိုနေတတ်လို ထင်တယ်။ ရတာကိုပဲ အဆင်ပြေအောင် သုံးတတ်တာလဲပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာနည်းတယ်။
(အဟီး… မလိုချင်လဲနေရော လိုချင်လဲ ..ပြောတော့ပါဘူးလေ.. အကြောင်းတွေသိကုန်မယ် ဟဲဟဲ)
(7)သုံးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်း - Sony Ericsson xperia X8
(စစ၀ယ်ဝယ်ချင်းတုန်းကတော့ ကလိနေရတာနဲ့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ မြန်မာဖောင့်လေး ထည့်လိုက် application လေးအသစ်ထည့်လိုက်နဲ့ ခုတော့လဲ သူ့ကို အချိန်ပေးဖို့နေနေသာသာ ဖုန်းတောင် အများကြီး မပြောဖြစ်အောင် အချိန်တွေရှားပါးနေတယ်။ အဟုတ်)
(8)အရူးသွပ်ဆုံးအရာ - ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့် ဘလော့တွေလည် စာတွေဖတ်။ virus တွေသတ်လိုက် file cleaner လေး run လိုက် software တွေစမ်းတင်လိုက် download လိုက် မကြိုက်ရင် uninstall လုပ်လိုက်နဲ့
အဲလိုနေရတာကို ရူးသွပ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ။ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ research တွေများရှာရင် တစ်နေကုန် ရေ တောင်မသောက်မိဘူး။ မေ့နေတာ။
ဒါကိုပဲ ရူးသွပ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ဒါတောင် game ဆော့တာမပါသေးဘူး။
(ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ပြောကြတယ် programmer ကိုများ ရည်းစားတော်မိပြီဆိုရင် စိတ်ရှည်သည်းခံ စောင့်ဆိုင်းရန်နှင့် အချိန်ပေးရန်လိုသတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ နေတဲ့ အချိန်က ပိုများသကိုး )
(9)အနီးစပ်ဆုံးဂီတ - April သင်္ကြန်ကျတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်လိုက်တာဖြစ်ချင်းပေါ့။ သင်္ကြန်သီချင်းတွေနားထောင်မယ်ဆိုပြီး download လုပ် ဖုန်းထဲထည့်လိုက်ထားတာ သင်္ကြန်ပြီးလို့ April ကုန် MAY သာရောက်လာရော ခုချိန်ထိ တစ်ပုဒ်မှ နားမထောင်ရသေးဘူး။ ဒီတော့ ဝေးနေတယ် ရှိဘူးလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။
(10)အလိုချင်ဆုံးစာအုပ် - ပြောပြန်ရင်လဲ ဒီသူငယ်မ မရှိတာတော်တော်များတယ်လို့ ပြောကြတော့မှာပဲ။ ရှိဘူး ကြုံသမျှ အကုန်ဖတ်တယ်။
(11)အခုဖတ်ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ် - မရှိပြန်ဘူး ရှင့်။
(12)အကြားချင်ဆုံးစကား - ဒီနေ့ Client site Customer ဆီက ဖုန်းလုံးဝ မလာဘူး။
(ဟီး အဲဒီ အသံ အကြားချင်ဆုံးပဲ :D)
(13)အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ - အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ချင်တယ်။ အရမ်းကြီးကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ချင်တယ်။
(14)အလိုချင်ဆုံးဆု - မေတ္တာတရားနဲ့နေပြီး လောဘ ဒေါသ မောဟ မကြီးသောသူ အေးချမ်းသောသူ ဖြစ်ချင်တယ်။
(15)အသွားချင်ဆုံးနေရာ - ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး
(16)သွားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ - ကမ်းစပ် ၊ အလုပ် နဲ့ အိမ်
(17)အကြည့်ချင်ဆုံးရုပ်ရှင် - Action နဲ့ မြန်မာ အငြိမ့်ဟာသကောင်းကောင်း (သို့သော် မကြည့်ဖြစ်ပါ)
(18)အပြောချင်ဆုံးစကား - ကောင်းကောင်းနေပြီး ကောင်းကောင်းကြံပါ
(19)အယုံကြည်ဆုံးလူသား - ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့သူ ရင်းနှီးတဲ့သူအားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အရှိကို အရှိအတိုင်း ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ရကောင်းလား မကောင်းလား တစ်ခါမျှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ပဲ ခံရတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လဲ အမှတ်မရှိပါဘူး။
(20)မယုံကြည်ဆုံးအရာ - အဲဒါတော့ရှိတယ် “ကံ” ဘယ်တော့တစ်ထစ်ချတွက်လို့မရဘူး။ ကိုယ်ထင်တာ ရည်မှန်းတာနဲ့ အမြန်တမ်း ပြောင်းပြန် အချိုးကျတယ်။ အဟုတ်။
(21)အမုန်းဆုံးအရာ - သူများတွေတော့ မသိဘူး။ မျှော်တစ်လင့်လင့် ဖြစ်လာနိုးနိုးနေရတာကို မုန်းတယ်။
(လုပ်မယ်ဆို ခုလုပ်မယ် သေရင်သေ မသေရင်ရှင်ဒါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လဲ ခဏခဏ ပင်ပန်းတယ် ဒါပေမယ့် မပြင်ဘူး ဒီလိုပဲ ဆက်လုပ်နေတယ်.. လူမိုက်ပဲလား မသိပါဘူး)
(22)အသောက်ဖြစ်ဆုံးအအေး - အအေးတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ခြောက်နှပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းများဆို တစ်နေ့ကို ၅ ခွက်လောက်ကနေ ၇ ခွက်လောက်ထိ သောက်ဖြစ်တယ်။
(23)လတ်တလောအထိတွေ့ဆုံးအရာ - အလုပ်
(24)မကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေး - ကောင်းလိုက်တာ ဖျားပြီးအလုပ်ကခွင့်ယူချင်တာ (ခုထိ မဖျားဘူး… ဂယ်)
(25)အကောင်းဆုံးအဖော် - တရား
(26)လက်ရှိအကြိုက်ဆုံးသီချင်း - ရှိဘူး (ခံစားချက်တွေထက် လတ်တစ်လောဖြတ်နေရတဲ့ အရာတွေ အပေါ်မှာ စိတ်က ပိုရောက်နေတယ်)
(27)အကြောက်ဆုံးအလုပ် - စိတ်မပါတဲ့ အရာကို လုပ်ရမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ။
(စိတ်မပါဘူးဆို လှည့်ကိုမကြည့်တာ။ အရင်ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆို ဟင်းချက်ခိုင်းရင် ဒီနေ့ စိတ်မပါဘူးနော်ဆို
မချက်ခိုင်းတော့ဘူး။ အိမ်ကလူတွေသိတယ် တူးတာစားမလား ငံတာစားမလား ချဉ်တာစားမလား အဲလိုမေးတာနဲ့ တူတူပဲဆိုတာ ဟီးဟီး)(စာကြွင်း ကိုယ်များစားချင်လို့ ချက်လို့ကတော့ ရှယ်နော် ကြွားတာဟုတ်ဘူးနော် ကြုံလို့ ပြောပြတာ)
(28)တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာ - ရှိပြန်ဘူး။ (ဖြေရတာ အားတောင်နားတယ် တိကယ်)
(29)အကြောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန် - တီကောင် (ရီရဘူးနော် ဖတ်ပြီး)
(30)တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဘလော့ဂါတွေ - တစ်ယောက်တည်းပါကွယ် (တွေ့စရာ ဘလော့ကာ ဒီမြေမှာ ရှိမှ မရှိပဲ)
(31)အပြင်သွားတိုင်းပါတဲ့ပစ္စည်း - ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ဖုန်းပေါ့ကွယ်..
(32)သွားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ - ကမ်းခြေ ခဏခဏ သွားတယ်
(33)စိတ်အညစ်ဆုံးအချိန် - ဘ၀မှာ ကြီးကြီးမားမား နှစ်ခါလောက်ညစ်ဖူးတယ်။ ခုတော့လဲ ရိုးသွားတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ညစ်သင့်တဲ့ အချိန်တော့လူပဲ ညစ်တာပေါ့လေ။
(34)အနေချင်ဆုံးနေရာ - အေးချမ်းတဲ့နေရာ
(35)ကြားလိုက်မိတဲ့ဟာသလေးတစ်ခု - စားစရာ ဘာမှ မရှိလို့ လုပ်ရမှာလဲပျင်းလို့ tv ကိုစိတ်ပြောင်းအောင် ဖျတ်ကနဲ ဖွင့်လိုက်တော့ သူတို့ ကြက်ကင်တွေ စားနေကြတယ်တဲ့။
(36)ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ခု- သင်္ကြန်ဆိုလျှင် မုန့်လုံးရေပေါ်ကို တွဲသိကြသလို ခုချိန်ထိ အလုပ်ရေပေါ်တာ မမြုပ်သေးဘူးကွယ်။ တစ်ကယ်ပြောတာပါ။ အတည်..
(37)အပျော်ဆုံးဖြစ်မယ့်အချိန် - ရှိလာတော့မယ် မထင်ဘူး။
ကိုအုပ် က tag ပြီးလို့ CBOX မှာအော်သွားတော့ အော်ရေးရအုန်းမဟဲ့ဆို အားတင်းပြီးရေးလိုက်ပါတယ်လို့။
ခုတောင် မနက် ၆ နာရီထိုးပြီး မအိပ်ရသေးဘူး။ ခုလို သတိတရ ရေးဖြစ်အောင် tag ပေးတဲ့ ကိုအုပ်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ြ့ပီးတော့ ဆွေလေးဘလော့ကို ပစ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ လာလည်ကျတဲ့ ဘလော့မောင်နှမများကိုလဲ သတိရနေပါတယ်လို့..
ကိုဇော် 20 May 2011 at 18:50
ရေးထားတာ သဘောကျသဗျာ။ တော်တော်လည်း ရယ်လိုက်မိတယ်။ ဟီးဟီး . . . ဘဝ ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလေ။ ပျော်ပျော်နေ သေခဲပဲပေါ့။ နောက်ဆုံး အချက်က ရှိလာတော့မယ် မထင်ဘူး ဆိုပေမဲ့ နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်နေမယ် လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
*** (7)သုံးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်း - Sony Ericsson xperia X8 *** အချက်က အတူတူ ဆိုတော့ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်းလေး ပြောပြပါလား။ ထည့်ကြည့်ချင်လို့။ အားတဲ့ အချိန် အထိ . .. စောင့်မယ် လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ နေ့တိုင်း လာအော်မယ် လို့ ပြောမလို့ :D :D ( ပြောပြနော်။ )
မောင်မျိုး 20 May 2011 at 21:04
စိန်လက်စွပ်... မွေးနေ့ရောက်ရင် ပို့လိုက်မယ်ဗျာာာ .။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 21 May 2011 at 00:27
တစ်ကယ်ပဲဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုဇော်လိုပဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ရယ်မောမိတယ်မမ..... စိတ်ထဲရှိတိုင်း လွပ်လွပ် နေတက်သူဆိုတာ သိလိုက်ရရင်း အားကျမိတယ်။။။။:):):)
အုပ်ကြီး 21 May 2011 at 01:46
(၈)စိတ်ရှည် သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန်
မောင်းရန် မော်တော်ကား ..အဲ .
ထားရန် Progmmer ရည်းစားပေါ့နော် ..
တဂ်ပို့ လေးအတွက် ကြေးအိုးပို့ ပေးရဦးမလားဗျ :)
မိုးယံ 21 May 2011 at 02:56
တီကြောက်တဲ့ အဒေါ်ကြီး ၊ ကိုယ်စားချင်တဲ့ ဟင်းချက်တော့မယ်ဆို တစ်ချက်လောက် အကြံပြုပါဗျာ။
ဆွေလေးမွန် 21 May 2011 at 08:29
မွေးနေ့က လာမယ့် သြဂုတ်မှာ်နော်. တစ်ကယ်ပို့မပို့
စောင့်ကြည့်မှာ. List ထဲ ထည့်လိုက်ပြီးနော်
တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်စိတ်ရှိကို ရှိတဲ့အတိုင်းနေရတာက ပိုကောင်းတယ်။ ဟန်ဆောင် နေရတာက ပိုပင်ပန်းတယ်လေကွယ်..
ဆောင်ပုဒ်တွေရွတ်မနေနဲ့ တစ်ကယ်ပြောတာ programmer ကိုရည်းစားမလုပ်နဲ့ ချိန်းရင် အမြဲ စောင့်ရမယ်။ စကားပြောရင်စိတ်က ချစ်ချစ်ဆီမှာ မရှိ.. ဟီးဟီး ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တွေ့.
ဟတ်ကဲ့ မိုးယံတူလေး...ဒီတစ်ခေါက်စိတ်ပါလို့ ချက်ရင် လက်တို့လိုက်မယ်နော်. လာစာလှည့်..
ထမင်းတော့ အလကားကျွေးမယ် လေယာဉ်လက်
မှတ်တော့ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်.
ဘလော့မောင်နှမများအားလုံးကို အလုပ်တွေများနေတဲ့ ကြားက သတိရနေပါတယ်လို့။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 21 May 2011 at 09:21
တို့လဲ သတိတရနဲ့ လာဖတ်ပါတယ် ဆွေလေးရေ
အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေစေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ် ဆွေလေးရဲ့ စာတွေကို လွမ်းနေတာပါ။
မွေးနေ့မှာ လိုချင်တဲ့ စိန်လက်စွပ်ကြီး ရပါစေး)
မြစ်ကျိုးအင်း 21 May 2011 at 11:02
နံပါတ် ၁၃ လေး သဘောကျတယ်။
ဟုတ်တယ် အဲဒီလို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်လိုက်ချင်တယ်။ တစ်ခုပိုတာက အိပ်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီလို အိပ်လိုက်ချင်တာ။
ခနွဲ 25 May 2011 at 11:46
ရေးတက်တယ်နော်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ဖတ်ရတဲ့သူကို ဆွဲခေါ်သွားတာပဲ။ တီကောင်တော့ ကျွန်တော် မကြောက်ဖူးရယ်။ ရွံတာ။ အဲဒီအကောင်ကြီးကို။
ခိုင်နုငယ် 26 May 2011 at 00:12
ကျွန်မက မြစ်တစ်စင်းလိုတော့ မကောက်ကွေ့တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မြစ်ကျဉ်းတွေတော့ များတယ် ..မောင်။ စိတ်ရဲ့ စေစားရာအတိုင်းလုပ်ပါလို့ ဆိုရင...
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သစ်ပင်အိုကြီးပေါ်မှ သစ်ရွက်ခြောက်လေးများ လေအဝှေ့မှာ ကြွေကြသံမှတစ်ပါး မည်သည့် အသံမျှ...
ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီး ဒီဇင်ဘာရယ် မင်းကတော့ ဒီလိုပဲ နှစ်တစ်နှစ်တိုးလိုက် တစ်နှစ်ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာလိုက်ပဲ. ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ဒီဇင်ဘာဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်...
ညှာတာပါ စာနာပါလို့ ငါမတောင်းဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် အလိုက်ကန်းဆိုးလေးတော့ သိသင့်တာပေါ့။ ။ လေးစားပါ ရိုသေပါလို့ ငါ မပြောခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ...